Mazuva ekukomberedza akakomberedza zvidhinha zvikuru zvemagetsi netambo dzakawanda kuti zvishandiso zvako zvigare pamusoro zvinogona kunge zvichipera. Kumirira maawa kuti yako smartphone kana Laptop kubhadharisa, kana kushamiswa nechaja inotyisa inotyisa, zvinogona zvakare kuve chinhu chekare. GaN tekinoroji iri pano uye inovimbisa ku ...
Gallium Nitride ndeye bhanari III / V yakananga bandgap semiconductor iyo inokodzera-yakakwira-simba simba transistors anokwanisa kushanda pane yakanyanya tembiricha. Kubva kuma1990, yanga ichishandiswa kazhinji muchiedza chekuburitsa diode (LED). Gallium nitride inopa mwenje webhuruu unoshandiswa pakuverenga-kuverenga muBlu-r ...